Tue, Apr 24, 2018 | 06:25:54 NST
प्रधानमन्त्रीले चीनलाई तेल बेच्ने योजना सुनाउनुभयो । अहिले नेपालले भारतबाट विद्युत आयात गरिरहेको छ तर पनि दिनमा ११ घण्टा लोडसेडिङ छ । पहिला लोडसेडिङ हटाउनुहोस न अनि पो चीनलाई बिजुली बेच्ने सपना देख्न सुहाउँछ त ।
​एमडी सलाम अन्सारीे
​ मधेसवादी दलले नेपालको हितमा आन्दोलन गरेका हुन् भने सरकारसँग वार्तामा बसेर निकासमा पुग्नुपर्छ नभए आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन ।
हामी केही युवा मिलेर गाउँमै उद्यम गर्न चाहान्छौं । तर सहुलितय व्याजमा ऋण र सिप दिने कोही छैन अनि बुझ्न पनि कहाँ जाने थाहा छैन । स्वरोजगारका लागि अनुदान दिइने बारेमा सुनेका त छौं तर यस्ता कार्यक्रम रोल्पामा किन नआएका ?
मधेसी मोर्चा आन्दोलनबाट किन नथाकेको ? सरकारले पटक पटक वार्तामा आउ भन्दा पनि नागरिकलाई दुख दिनु पक्कै राम्रो होइन । नागरिकको हितको लागि आन्दोलन गरेको हो भने वार्तामै गएर टुंग्याउनुपर्छ ।
एउटा रुखबाट हजारौ सलाईका काँटी बन्छन् तर त्यही एउटा काँटीबाट सल्किएको आगोले जगंलका लाखौ रूख एकैछिनमा सखाप पार्छ । यस्ता कुरामा सबैको ध्यान दिनुपर्छ । तर खै त हामीले बुझेका ?
दलहरुले संविधान कार्यान्वयन गर्नुको साटो किन सरकार परिवर्तनको आवाज उठाउँछन ? अहिले सरकार फेर्ने कुरा गर्दा त नेतालाई लाज पो लाग्नुपर्ने होइन र ?
​पुननिर्माणमा सरकार भन्दा धुर्मुस सुन्तली अगाडी देखिए । यस्तै हो भने अब प्रधानमन्त्री ओली मेरी बास्सै खेल्न जाँदा भइगो नी ।
डढेलो लागेको लाग्यै छ । आवश्यक व्यवस्थाका साथ यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व कसको ? सरकारकै हैन र ?
भूकम्प जाँदा जति मन दुखेको थियो । त्यो भन्दा पनि आज मन दुखेको छ । एक वर्ष वितिसक्दा पनि भूकम्प पीडितलाई राहत पुर्‍याउने कुनै पहल भएको छैन । विदेशबाट आएको सहयोग कता गयो अनि अव विकास सुरु हुन्छ भनेको होइन अहिलेसम्म के भयो ?
भुकम्प आउँछ सरकार, हुरी चल्छ सरकार, आगलागी हुन्छ सरकार । हैन सरकारले नै सबै प्रकोप ल्याउने त होइन नि । गर्दै त छ नि सरकारले पीडितका लागि । तर पनि कहिले पनि जस पाउने हैन सरकारले । ढिलो छिटो त हुन्छ नि त्यसैले एकोहोरो हैन दोहोरो सोचौं ।
छिमेकी देश र दातृ निकायले भुकम्प पीडितका लागि खाद्यान्न र लत्ताकपडासँगै इन्डक्सन चुलो पनि सहयोग गरेका छन तर यी सबै कुरा भन्सारमा थन्किएर कुहिसके । सरकारले के गरिरहेको छ ? कहिले पुग्छन यी कुरा पीडितसम्म ?
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरुको विदेश भ्रमण संस्कार जस्तै भयो । भ्रमण पछिको उपलव्धी र खर्चबारे लेखाजोखा खोई त ? यसको आरम्भ प्रधानमन्त्री ओलीको चिन भ्रमणबाटै गरे कस्तो हुन्छ ?
भारततिरका नाका अलिक खुकुलो भएपछि चीनसँगको सम्झौताको कुरा सेलायो नि । फेरि कहिले भारतले नाकाबन्दी गर्छ अनि फेरि सरकार तडपिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षमा भान्सामा ग्यास पाइप लाइन जोडिदिने घोषणा गरिरहँदा सबै गलल हाँसेको सुन्दा मलाई जोक भने जस्तो लाग्यो । त्यसले म पनि हासें । जे होस प्रधानमन्त्रीको जोक चाहिँ गज्जवको थियो ।
​एपी शर्मा, ओखलढुङगा
भ्रष्टाचार गर्नेहरुको कमी छैन हाम्रो समाजमा त्यसैले विचार गरिदिनुस सरकार । पीडितका नाममा गैर पीडितले राहत पाइरहेका छन । त्यही भएर पालमा बसेका भुकम्प पीडितको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । त्यसैले सरकारले सहज तरिकाले पीडितसम्म राहत पुग्ने गरी काम गरोस ।
मधेसका नेताले प्रहरीले आम नागरिकको हत्या गर्‍यो भन्छन । तर मधेसकेन्द्रित दलका कार्यकर्ताले प्रहरीमाथि पेट्रोल बम र भालाले आक्रमण गर्दा प्रहरी कसरी हात बाँधेर बस्छन ? तपाईहरु आफनो आन्दोलन शान्तिपुर्ण बनाउनुहोस न । प्रहरीले गोली किन चलाउँछ र ?
वार्तामा मधेशी नेताले हामी नाकामा आफ्नो अधिकारका लागि बसेका छौं भने छन् । तर नेताजी तपाईले ६ कक्षामै पढ़नु भएन अधिकार माग्दा कर्तव्य भुल्नु हुँदैन भनेर ?
भारत र चीन हाम्रा उस्तै र उत्तिकै नजिकका मित्रराष्ट्र हुन । तर हामीले समान रुपमा सम्बन्ध राख्न नसक्दा बारम्बार समस्या भोगिरहनुपरेको छ । अहिलेको नाकाबन्दी पनि यसैको परिणाम हो । त्यसैले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अहिलेलाई मधेस केन्द्रित दलहरुलाई पनि समेटेर लिएर जानुपर्छ । नभए अहिलेको सानो घाउ भोली क्यान्सर हुन सक्छ ।
चीनले इन्धन दिन्छु भन्दा त्यहाँबाट धमाधम ल्याउन छोडेर सरकार दाउरा बाँड्नतिर लागेको छ । के भारतसँग डराएरै हो चीनसँगको सम्झौता अघि नबढाएको ?
संविधान बनाऊँदा एक भएका नेता र दलले एकताको पाठ भुलेछन् क्यारे । आखिर भाइ फुटे गवार लुटे भन्ने बुढापाकाको भनाई त सिद्द नै भयो तर खै त नेताले यो कुरा बुझेका ।